Dad ku waxyeeloobay Israsaaseyn ka dhacday Duleedka Degmada Cadaado. – SBC
Dad ku waxyeeloobay Israsaaseyn ka dhacday Duleedka Degmada Cadaado.
1 Qof ayaa dhintay 4 kalena waa ay dhaawacmeyn ka dib markii israsaaseyn maanta ka dhacday gudaha degmada Cadaado maamulka Ximan iyo xeeb.
Israsaaseyntani ayaa dhexmartay ciidamo ka tirsan maamulkaasi oo ku sugnaa bar Control oo ka mid ah kuwa ku yaala gudaha degmadaas iyo rag la sheegay in ay ka soo laabteen siyaaro lagu dhigayay deegaan gobolka Mudug ka tirsan.
Taliyaha Ciidamada Amaanka Maamulkaasi Ximan iyo xeeb C/raxmaan Qiilmawaaye, ayaa sheegay isagoo lahadlayay xafiiska SBC international ee Gobolkaasi Galagaduud in raga rasaasta ku furay ciidamada ay ahaayeen kuwo ka tirsan Ahlusuna waljamaaca .
Maamulka Ahlusuna waljamaaca ayaa iaga dhankooda diiday eedeynta Ximan iyo xeeb, gudoomiye ku xigeenka 3aad ee gudiga Fulinta Axmed C/laahi Maxamuud Ilka case ayaa isna lahadlay SBC isagoona been abuur ku tilmaamay arinkaasi, aysana aheyn ciidamada la sheegay in ay rasaaseeyeen kuwa Ximan iyo xeeb kuwo ka tirsan iyaga.
Qaar ka mid ah saraakiisha caafimaad ee isbitaalada la gaarsiiyay dadka ku waxyeeloobay dhacdadan ayaa dhankooda xaqiijiyay in dadka dhaawaca ah ay ku jiraan dumar ayna qaarkood yihiin dad uu dhaawacoodu liito.